भाषा Archives | Nepali In Japan
9Mar By Nepali In JapanNo Comments
एयरपोर्टमा प्रयोग हुने जापानी वाक्यांशहरु
हाम्रो नियमित जापानी भाषाको ब्लगहरु पढिरहनु भएको छ भने आजको यो ब्लग पनि पढ्न नछुटाउनुहोला ।आज चै हामीले एयरपोर्टमा प्रयोग हुने जापानी वाक्यांशहरु तयार पारेका छौ । 1 搭乗口にはいつ頃行くべきでしょうか ( Tōjōguchi niwa itsu goro ikubeki deshōka ? ) - एरपोर्टको बोर्डिङ गेटमा कति बजेसम्म पुग्नुपर्छ ?2飛行時間は何時間ですか ( Hikō jikan wa nanjikan desuka? ) - उडानको समय कति घण्टा हो ?3乗り継ぎは何時間ですか ( noritsugi wa nanjikan desuka? ) - ट्रान्जिटको समय कति घण्टा हो ?4温かい機内食はでますか. ( Atatakai kinaishoku wa demasuka? ) - के तपाईहरुले तातो खाना सेवा गर्नुहुन्छ?5飛行機は込んでいますか ( Hikōki wa konde imasuka? ) - के हवाइजहाज प्याक(एउटा पनि सिट नभएको ) हो ?6ビザは必要ですか ( Biza wa hitsuyō desuka? ) - भिसा चाहिन्छ ?7ビザの有効期限はいつですか ( Biza no yūkō kigen wa itsu desuka? ) - भिसा कहिलेसम्म छ ? 8...
6Mar By Nepali In JapanNo Comments
जापानमा गर्भवति हुनु हुन्छ ? आजको यस लेखमा हामीहरुले जापानी भाषामा गर्भावस्था र प्रसवसँग सम्बन्धित विविध उपयोगी शब्दावलीहरुबारे बताउन गइरहेका छौं । यसबाहेक पनि यस लेखमा जापानमा गर्भवति हुनु र जापानमा शिशु जन्मेपछि पाइने आर्थिक सहायता बारे केही जानकारीहरु समेत दिनेछौं । यो जानकारी जापानी भाषा सिकिरहनुभएकाहरुका लागि पनि उपयोगी छ । धेरै प्रयोगमा आउने शब्दहरु तल जापानमा गर्भवति महिलाको स्वास्थ्य जाँचको बेलामा थाहा पाइराख्नु पर्ने केही शब्दहरु बताइएको छ । – 産婦人科 ( Sanfujinka ) - प्रसुति एवं स्त्री रोग – 病院 ( Byouin ) - अस्पताल – 訪問時間 ( Houmon jikan ) - भेट्ने समय – 医者 ( Isha ) - डाक्टर – 看護師 ( Kangoshisan ) - नर्स – 助産師 ( Josanshi ) - सुडेनी – 妊娠 ( Ninshin ) - गर्भावस्था – 妊婦 ( Ninpu ) - गर्भवति महिला – 分娩 ( Bunben ) - प्रसव – 入院 ( Nyuuin ) - भर्ना – 定期検診 (...
24Feb By Nepali In JapanNo Comments
प्रेमसँग सम्बन्धित जापानी वाक्यांशहरुको नेपाली अर्थ
हाम्रो नियमित जापानी भाषाको ब्लगहरु पढिरहनु भएको छ भने आजको यो ब्लग पनि पढ्न नछुटाउनुहोला ।आज चै हामीले प्रेमसँग सम्बन्धित जापानी वाक्यांशहरु तयार पारेका छौ । 1 いつも私を覚えていてください。 ( Itsumo watashi o oboete ite kudasai. ) - मलाई सधैँ सम्झनुहोस्।2あなたは結婚していますか？ ( Anata wa kekkon shite imasu ka? ) - तपाईं विवाहित हो?3ここへ来られますか？ ( Kokoekorare masu ka? ) - के तिमी यहाँ आउन सक्छौ?4私を傷つけないでください。 ( Watashi o kizu tsukenai de kudasai. ) - कृपया मलाई चोट नपार्नुहोस्।5嘘をつかないでください。 ( Uso o tsukanai de kudasai. ) - कृपया झुट नबोल्नुहोस् |6当たり前だと思わないでください。 ( Atarimaeda to omowanaide kudasai. ) - यसलाई स्वाभाविक रूपमा नलिनुहोस् |7お前は心配しないのか？ ( Omaewa shinpai shinai no ka? ) - के तिमीलाई मतलब छैन? 8 私のことを大切に思っていますか？ ( Watashi no koto o taisetsu ni ...
7Jan By Nepali In JapanNo Comments
सडक संकेतबाट जापानी भाषा सिक्ने तरिका
जापानमा तपाइले यहाँ जता ततै अनेक संकेतहरु देख्न सक्नु हुनेछ । लगभग सबै संकेतहरु जापानीमा लेखिएका हुन्छन् । विदेशीका रुपमा यी संकेतहरु बुझ्न कहिलेकाँही गाह्रो पनि हुन्छ । पछिल्लो समयमा जापान भ्रमणमा आउने विदेशीको संख्या बढिरहेको छ । विदेशी मैत्री बनाउन जापान सरकारले यी संकेतहरुको अनुवाद पनि गरिरहेको छ । यी संकेतहरुबाट रमाइलोसँग जापानी भाषा सिक्न पनि सकिन्छ । आजको यस लेखमा यस्तै केही संकेतहरुबारे बताउन गइरहेका छौं । १. फोहोर नगर्न भन्ने डाइनोसोर एकदम सृजनात्मक लागेको एउटा संकेत हो सन्देश भन्न डाइनासोरको प्रयोग । संकेतमा ‘ごみ捨て禁止’ लेखिएको थियो । अंग्रेजीमा यसको अर्थ फोहोर नगर भन्ने हुन्छ । २. तपाइमाथि निगरानी भइरहेको छ यो घाँसमा लुकाइएको अर्को संकेत हो र त्यो पनि लगभग मेटिसकेको थियो । सो संकेतमा ‘どこかであなたを見ています’लेखिएको थियो । यसको अर्थ ‘तपाइमाथि कतैबाट निगरानी भइरहेको छ भन्ने हुन्छ’...
23Dec By Nepali In JapanNo Comments
जापानमा गर्भवति हुनु हुन्छ ? आजको यस लेखमा हामीहरुले जापानी भाषामा गर्भावस्था र प्रसवसँग सम्बन्धित विविध उपयोगी शब्दावलीहरुबारे बताउन गइरहेका छौं । यसबाहेक पनि यस लेखमा जापानमा गर्भवति हुनु र जापानमा शिशु जन्मेपछि पाइने आर्थिक सहायता बारे केही जानकारीहरु समेत दिनेछौं । यो जानकारी जापानी भाषा सिकिरहनुभएकाहरुका लागि पनि उपयोगी छ । धेरै प्रयोगमा आउने शब्दहरु तल जापानमा गर्भवति महिलाको स्वास्थ्य जाँचको बेलामा थाहा पाइराख्नु पर्ने केही शब्दहरु बताइएको छ । – 産婦人科 ( Sanfujinka ) - प्रसुति एवं स्त्री रोग – 病院 ( Sanfujinka ) - अस्पताल – 訪問時間 ( Houmon jikan ) - भेट्ने समय – 医者 ( Isha ) - डाक्टर – 看護師 ( Kangoshisan ) - नर्स – 助産師 ( Josanshi ) - सुडेनी – 妊娠 ( Ninshin ) - गर्भावस्था – 妊婦 ( Ninpu ) - गर्भवति महिला – 分娩 ( Bunben ) - प्रसव – 入院 ( Nyuuin ) - भर्ना – 定期...
15Dec By Nepali In JapanNo Comments
औषधी र स्वास्थ्यसंग सम्बन्धीत जापानी भाषाका शब्दहरु
जापानमा छँदा स–सानो विरामी परियो वा कतै घाउ चोट लाग्यो भने के गर्ने होला त ? अझ जापानमा अंग्रेजी भाषाको त्यति प्रयोग नगरिने हुँदा के रोग लाग्दा कुन औषधीको प्रयोग गर्ने भन्नेबारे विदेशीलाई कमै जानकारी हुन्छ । त्यसैले आजको लेखमा तिनै जापानी औषधी र तीनको जापानी शब्दाबलीका बारेमा केही जानकारी पस्किने तयारी गरिएको छ । रुघा–खोकी रुघा–かぜ／風邪 (kaze) घाँटी–のど／喉 (nodo) खोकी–せき／咳 (seki) खतरनाक खोकी–咳きこむ／咳き込む(sekikomu) बन्द नाक–鼻づまり／鼻詰まり(hanazumari) हाच्छयूँ–くしゃみ (kushami) काम्नु–さむけ (samuke) ज्वरो– 発熱／熱 (netsu) एलर्जी–アレルギー (arerugī) दम–ぜんそく／(zensoku) गर्धनको दुखाई–肩こり (katakori) उल्टी–吐き気／はきけ (hakike) आवाजसहितको उल्टी–こみ上げる(komiageru ) पेटसँग सम्बन्धित समस्या बढी खानु–食べ過ぎ／食べすぎ／たべすぎ(tabesugi) बढी पिउनु–み過ぎ／飲みすぎ／のみすぎ (nomisugi) पेट भारी, पाचनमा समस्या–胃もたれ...
13Dec By Nepali In JapanNo Comments
‘सुमिमासेन’ कतिबेला भन्ने ?
सुमिमासेन (すみません) : जापानमा हुनुहुन्छ भने यो शब्द जापानीहरुले कुरा गर्दा धेरैपटक प्रयोग गरेको सुन्नुभएकै होला । सामान्यतया यो ‘कृपया’ वा ‘माफ गर्नुहोस्’ जनाउनका लागि प्रयोग गरिन्छ तर यसको प्रयोग भने धेरै ठाउँमा हुन्छ । सुमिमासेन शब्द कुनै जापानीले त दिनमा कम्तिमा पनि १० पटक त भनेकै हुन्छन् कि जस्तो लाग्छ । :D तर यो भन्नुको मतलब जुनबेला पनि माफि नै मागेको भन्ने चाहिँ होइन । यसले विभिन्न अवस्थालाई पनि बुझाउँछ । आजको लेखमा यसैबारे केही जानकारी दिने प्रयास गरिएको छ । १.सुमिमासेन –मलाइ माफ गर्नुहोस् यो शब्दको वास्तविक मतलब नै यहि हो 'मSorrलाइ माफ गर्नुहोस्'। उदाहरणका लागि, रेष्टुराँमा यदि तपाइले कसैको सर्टमा पानी पोखिदिनुभएको अवस्थामा ‘सुमिमासेन’ भन्न आवश्यक छ । तर गहिरो क्षमा याचनाका लागि प्रयोग गरिने शब्द अर्कै छ-, विशेषगरी व्यावसायिक क्षेत्रमा । तर सुमिमासेनको प्रयोग आफ्ना हाकिम र सहकर्मी...
9Dec By Nepali In JapanNo Comments
जापानमा थाहा पाइराख्नु पर्ने ५ व्यवसायिक वाक्यांश
के तपाई रोजगारी वा व्यवसाय संचालनको शिलशिलामा जापान आउने योजनामा हुनुहुन्छ ? वा यही बसेर व्यवसाय अथवा रोजगारी गर्दै हुनुहुन्छ ? त्यसो हो भने तपाईलाई व्यवसायिक क्षेत्रमा प्रयोग हुने औपचारिक जापानी भाषा, शिष्टाचारबारे ज्ञान हुनु पर्छ । यहाँको कार्यस्थलमा तपाईको सफलता वा असफलता केही अव्यक्त नियमहरुको पालनामा पनि भर पर्दछ । आजको यस लेखमा हामीहरुले व्यवसायिक जापानको संसारमा जान्नै पर्ने केही वाक्यांशहरुबारे बताउन गइरहेका छौं । १.お世話になります。( ओसेवा नि नारिमास् ) वा お世話になっております。( ओसेवा नि नात्ते ओरिमास् ) यसको अर्थ लगभग धन्यवाद नै हो । यो धेरै प्रयोगमा आउने शब्द मध्ये पर्दछ । कसैले तपाईलाई सहयोग गरेको छ, दया देखायो भने यो शब्द प्रयोग गरिन्छ । कसैको निरन्तर काम वा सेवाका लागि वा भविष्यको काम वा सेवाको लागि प्रशंसा गर्न पनि यसको प्रयोग गर्न सकिन्छ । 世話 ‘सेवा’ को अर्थ हेरचाह हुन्छ । 世話になる ‘से...
12Apr By NIJ AdminNo Comments
जापानमा विभिन्न प्रकारका 'वासेई एइगो' प्रयोग हुन्छ । वासेई एइगो अर्थात अंग्रेजीका साधारण शब्दलाई जोडेर वा परिवर्तन गरेर जापानी शब्दमा बनाउने प्रकृया । यसमा अंग्रेजी शब्द मात्र नभइ अन्य भाषाका शब्दहरु पनि समावेश गर्न सकिन्छ । यो त्यति प्रयोगमा नआउने र कहिलेकाहिँ विदेशीहरुले गलत अर्थ लगाउने पश्चिमी राष्टबाट लिइएकोे विभिन्न काताकाना शब्दहरु गाइराइ गो भन्दा फरक हो । तर यी दुवैलाई काताकाना वर्णमा लेखिन्छ र यीनलाई काताकाना अंग्रेजी भन्ने गरिन्छ । आजको लेखमा कार्यालयमा प्राय प्रयोगमा आउने केही वासेई एइगोका बारेमा जानकारी दिने प्रयास गरिएको छ । वास्तविक अंग्रेजी शब्दलाई भिन्दै अर्थ लगाएर प्रयोग गरिने वासेई एइगो एसएनएस अर्थ : सामजिक सञ्जाल वा सामाजिक नेटवकिं साइट सामाजिक नेटवर्किंङ साइट बुझाउने छोटो शब्द हो एसएनएस । शुरुमा यो शब्दले फेसबुक वा ट्विटरजस्ता सामाजिक नेटवर्किंङ साइट भन्ने अर...
10Dec By NIJ AdminNo Comments
तपाई जापान बस्नु हुन्छ र यही काम पाउनु भयो भने अन्ततः तपाईले जापानी भाषा सिक्नै पर्छ । नयाँ भाषा सिक्न शुरुमा चुनौतीपूर्ण हुन सक्छ । तर कठोर मेहनत र लगनशिलताले यो चुनौती जित्न सकिन्छ । यसमा स्व–अध्ययन पनि निकै महत्वपूर्ण छ । सिकाईमा सफल हुन सही भाषा विद्यालय र शिक्षक उत्तिकै जरुरी हुन्छ । दुर्भाग्यबस कोरोना भाइरसको महामारीबीच भाषा सिकाईको प्रक्रिया सुस्त भएको छ । आजको यस लेखमा हामीहरुले अनलाइन जापानी कोर्सका लागि उपयोगी केही वेबसाइटबारे जानकारी दिन थालेका छौं । १. शोको जापानी विद्यालय यहाँ अनुभवी प्रशिक्षकहरु छन् । यिनीहरुले तपाईको प्राथमिकताअनुसार विविध खालका पाठ्यक्रम पढाइरहेका छन् । कसका लागिः जेएलपीटी उत्तिर्ण गर्न चाहने, जागिरका लागि अन्तर्वार्ताको तयारी गरिरहेका, बोली, पढाई र लेखन शैली सुधार्न चाहनेहरुका लागि मूल्यः शुरुआती कोर्स र मध्यम कोर्सका लागि मासिक ५ हजार येन । वेबसाइट...
24Sep By NIJ AdminNo Comments
‘इताई’ शब्दको अर्थ पीडा भन्ने हुन्छ । जापानमा डाक्टरकहाँ जाँदा धेरै जसोले भन्ने पहिलो शब्द यही हो । यो एउटा शब्द धेरै थरी अवस्थामा प्रयोग गर्न सकिन्छ । तर डाक्टरकहाँ जचाँउन जाँदा यो एउटा शब्द बोलेर मात्रै हुँदैन । आफूलाई भइरहेको पीडाबारे स्पष्ट रुपमा बताउन अझै धेरै शब्दहरुको खाँचो पर्दछ । डाक्टर वा डेन्टिष्टले तपाईलाई पीडाबारे पीडा सहनै नसक्ने छ कि अलि अलि सहन सक्ने खालको छ ? कुनै बेला धेरै दुःख्ने अनि कुनै बेलामा दुःखाई कम हुने खालको पो छ कि ? भनेर सोध्न सक्छन् । अंग्रेजीमा जस्तै जापानीमा पनि पीडाको व्याख्या गर्न विविध शब्दको प्रयोग गरिन्छ । यी सबैबारे थाहा पाइराख्नु उपयोगी हुन्छ । नत्र डाक्टरलाई पीडाबारे बताउँदा के भन्नु अनि कसरी भन्नु भन्ने टाउको दुखाई सधैं रहन्छ । जापानी भाषमा फरक खालको पीडाको वर्णन गर्न अर्थानुकरण (ओनोमातोपाइया)को प्रयोग गरिन्छ । यसका केही अपवादहरु पनि छन् । यसका केही...
6Sep By NIJ AdminNo Comments
यसरी भर्न सकिन्छ जेएलपिटीको अनलाइन फारम
जापानी ल्यांग्वेज प्रोफिसियन्सी टेष्टबारे यस अघिका लेखहरुमा थुप्रै जानकारीहरु दिइसकिएको छ । आजको लेखमा यो परिक्षाका लागि अनलाइन आवदेन कसरी दिने भन्ने जानकारी प्रस्तुत गरिएको छ । परिक्षा मिति पहिला त परिक्षा शुरु हुने मितिका बारेमा स्पष्ट हुन आवश्यक छ । जेएलपिटीको परिक्षा हरेक बर्ष जुलाई र डिसेम्बर महिनालाई हुने गरेको छ । पार्ट १ः माईजेएलपिटी एकाउण्ट सेट अप गर्ने स्टेप १ः माईजेएलपिटी एकाण्टका लागि आवेदन दिने । आवेदन दिनका लागि यो लिंकमा क्लिक गर्नुहोस् । व्यक्तिगत रुपमा आवेदन दिने भएकाले पहिलो बटनमा क्लिक गर्नुहोस् । स्टेप २ः अब आफुलाई जे मा सजिलो हुन्छ सोही भाषा छान्ने । भाषा अंग्रेजी र जापानी दुई मध्येबाट एक छान्न सकिन्छ । स्टेप ३ः टर्म र कण्डिशनहरु एग्रि गर्ने र अघि बढ्ने । त्यसका लागि दायाँतर्फ रहेको आइ एग्रि लेखिएको हरियो बटनमा क्लिक गर्ने । स्टेप ४ः अब खुल्ने पेजमा तपाईक...
28Apr By Nepali In JapanNo Comments
जापानी उद्योग र तीनका नाम
जापानीमा उद्योगका बारेमा कुरा गर्ने सरल उपाय छन् । शब्दको अन्त्यमा 業界 (ग्योखाई, उद्योग) थपिदिए पुग्छ । आजको लेखमा जापानी उद्योग र तीनका जापानी नामका बारेमा जानकारी दिने तयारी गरेका छौं । १. म्यानुफ्याक्चरिंग उद्योग メーカー (मे-का-)- म्यानुफयाक्चर, निर्माता 食品·農林·水産 (स्योकुहिन,नोउरिन,सुइसान) - खाद्यान्न, कृषि र वन, फिशरी 建設 (केन्चिकु) - निर्माण 繊維( सेन्इ)-टेक्सटाइल 化学 (खागाकु) - रसायन 製薬 (सेइयाकु) - औषधि 化粧品 (खेस्योउहिन्) - कस्मेटिक 鉄鋼·金属 (तेक्कोउ किन्जोकु) - फलाम र स्टिल,धातु 電子·電気機器 (देन्सी देन्कीकिकी) - इलेक्ट्रोनिक्स 自動車·輸送用機器 (जिदोउस्या युसोउयोउकिकी) - अटोमोबाइलरयातायात 精密·医療機器 (सेइमिचु इर्योउकिकी) - प्रेसिजन, मेडिकल उपकरण スポーツ(सुपोअचु) - खेल 玩具(ओमोच्या) - खेलौना २. सेवा उद्योग サービス (सा-बिसु) –सेवा 不動産 (फुदोउसान) - रियलइष्टेट 運輸·物流 (उनयु बुचुर्युउ) - यातायात 電力·ガス·...